नेपालमा कफी खेती र यसको सम्भावना - कृषि डेली
Home banner नेपालमा कफी खेती र यसको सम्भावना
नेपालमा कफी खेती र यसको सम्भावना
नेपालमा वि.सं. १९९५ मा गुल्मी आँपचौर निवासी हीरा गिरीले वर्माबाट बिउ ल्याएर कफी खेतीको शुरुवात गरिएको थियो । यसैक्रममा पाल्पा, स्याङजा, पर्वत, अर्घाखाँची, कास्की, लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा, ललितपुर, धादिङ, मकवानपुर, म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायतका जिल्लाहरुमा कफी खेतीको बिस्तार हुँदै गयो ।
नेपालमा कफी खेतीको विस्तार एवं विकास गर्नको लागि सरकारले २०४१ सालमा गुल्मीको आँपचौरमा कफी बिकास केन्द्रको स्थापना गर्नुको साथै २०५० सालमा राष्ट्रिय चिया तथा कफी बिकास बोर्डको साथै कफी तथा चिया बिकास शाखा स्थापना भएपछि मात्र नेपालमा कफी खेतीले प्राथमिकता पाएको थियो ।
भौगोलिक, हावापानी र माटोको हिसावले नेपालका मध्य पहाडी जिल्लामा अराविका कफीको राम्रो सम्भावना देखिएपछि इलाम, संखुवासभा, झापा, पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, सिन्धुली, नुवाकोट, पयूठान, रोल्पा दाङ, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख डोटी, डडेलधुरा, रसुवा, खोटाङ र बैतडी जिल्लामा पनि व्यवसायीक कफी खेतीको शुरुवात भएको छ । यी वाहेक नेपालका अन्य मध्य पहाडमा पर्ने सबै जिल्लाहरुमा फाटफुट रुपमा कफी खेती भैरहेको छ ।
नेपालको विषेशतः मध्य पहाडी जिल्लामा कफी खेती गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना, वातावरण सुरक्षा तथा दिगो आय आर्जन गर्ने एक लोकप्रिय खेतीको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ । हाल देशको मध्य तथा पश्चिम पहाडी जिल्लामा समुद्र सतहबाट ८०० मिटर भन्दा माथि हिउँ, तुषारो नपर्ने ठाँउसम्म लगाईएको कफी गुणस्तरीय कफिको रुपमा उत्पादन भई विदेश तर्फको निर्यातले देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफिको माग दिनानुदिन बढ्दै गइराखेको परिप्रेक्षमा कफी उत्पादन क्षेत्रको बिस्तार गर्नुको उद्योगको समग्र विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालमा अहिले करिव गरी ३ हजार कृषकहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा कफी खेतीमा लागेका छन् । २०७४ को उत्पादन रेकर्ड अनुसार कुल १ हजार ९ सय ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा करिव ४८० मे. टन ग्रीन वीन उत्पादन भएको छ । विश्व बजारमा नेपालबाट उत्पादित प्राङगारिक कफीको माग दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ ।
पछिल्लो रेकर्ड अनुसार नेपालमा बार्षिक ४५० मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुन्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य मागलाई हेर्ने हो भने १० हजार मेट्रिक टन भन्दा बढीको बार्षिक माग भैरहेको पाईन्छ । यसवाट के बुझ्न सकिन्छ भने उत्पादित कफीको लागि आहिले मात्र होईन वर्षौवर्ष सम्म पनि बजारको अभाव देखिदैन ।
कूल उत्पादन मध्ये ७० प्रतिशत कफी कोरिया, जापान, अमेरिका, जर्मनी निर्यात हुने गरेको छ । अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको मागलाई हिसाव नै गर्ने हो भने वार्षिक १० हजार मेट्रीक टन भन्दा बढी छ तर उत्पादन नै कम भएको कारण उक्त मागको ५ प्रतिशत पनि निर्यात हुन सकेको अवस्था छैन ।
नेपाली कफी निर्यातवाट वार्षिक करिव साढे ७ करोड वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरेको छ तर अन्य मुलुकहरुबाट १२ करोड बरावरको विभिन्न ब्राण्डको धूलो कफी नेपाल आयात गरिन्छ । यसले के देखाउँछ भने अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा मात्र नभई नेपाली बजारमा पनि नेपाली अर्गानीक कफीको माग बढीरहेको छ ।
कफी विकासका चरण तथा सरकारका प्रयास
नेपालका केही जिल्लामा कफी खेतीको सम्भावना देखिएपछि २०३३ सालमा नेपाल सरकारले कृषि विकास बैक मार्फत भारतवाट अरेबिका जातको कफीको बिउ मगाई गुल्मी र बागलुङ जिल्लामा व्यवसायीक कफी खेतीको शुरुवात गराएको थियो ।
सरकारी क्षेत्रवाटै कफी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखि कफीको विस्तार एवं बिकास हुने क्रम बढ्दै गयो ।
नेपालमा कफी विकासका सम्भावना
सम्भावनाको हिसावले नेपाल अरेविका जातको कफी खेतीको लागि अत्यन्तै महत्वपुर्ण मानिन्छ । किनकी कुनै पनि कृषि उत्पादनको लागि मुख्य तथा ५ महत्वपुर्ण कुराहरु आवाश्यक पर्दछ र ती सबै कुराहरु नेपालका मध्य पहाडि सबै जिल्लाहरुमा सजिलै उपलव्ध छन् ।
तर यसको वारेमा जानकारी नहुँदा कस्तुरी हराएको मृग जस्तै बनिरहनु परेको अवस्था छ । हेरौ कफीका लागि केही महत्वपुर्ण कुराहरु ।
नेपालमा बिविध किसिमको भौगोलीक बनावट तथा हावापनी भएको हुँदा संसारका जुनसुकै देशमा लगाउन सकिने जुनसुकै जातका कफी लगाउन सकिने अवस्था छ । साथै भौगोलिक हिसावले हेर्ने हो भने नेपालको मध्य पहाडी जिल्लाको ८ देखी १७ सय मिटरसम्मको उचाई सम्म अराविका जातको कफी खेती गर्न सकिन्छ ।
अराविका जातको कफी खेतीको लागि आवाश्यक पर्ने ७० देखी ८० प्रतिशत सापेक्षिक आद्रता, १६०० देखि २५०० मिलिमिटर सम्म वर्षा र कम्तीमा १० देखी १२ घण्टा घाम लाग्ने र १५ देखी २५ डिग्रि सेन्टीग्रेड तापक्रम, अधिकांश उत्तर–पूर्बी र दक्षिण–पूर्बी मोहडा यही भौगोलिक क्षेत्र भित्र पाईन्छ ।
प्रविधिको हिसावले पनि अहिले नेपालमा नेपाल कफी व्यवसायी महासंघको प्रयासमा विभिन्न सरोकारवाला संघ संस्था, सहयोगी निकाय, दातृसंस्था तथा नेपाल सरकारका सरोकारवाला कार्यालयहरु सँगको समन्वयमा कफी पकेट क्षेत्र मानिएका बिभिन्न जिल्लाका करिव ३ सय भन्दा धेरै कफी प्राविधिकहरु उत्पादन गरि सकेको अवस्था छ ।
नेपालमा कफी खेतीको राम्रो सम्भावना देखेपछि धेरैले कफीमा बिद्यावारिधि समेत गर्दैछन् । यो नेपालको लागि र नेपालमा कफी खेतीको बिकासको लागि एउटा राम्रो पक्ष हो ।
प्रविधिकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सुचना तथा संचार प्रविधिको विकासको कारण अहिले जो कोहिलाई पनि जुनसुकै ज्ञान हासिल गर्न समस्या देखिदैन ।
जुनसुकै व्यवसाय संचालन गर्नका लागि पूँजी महत्वपुर्ण कुरा हो । पूँजी बिना व्यवसायीकताको कल्पना समेत पनि गर्न सकिदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैकले नेपाल सम्पूर्ण बंैक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई कुल लगानीको १५ प्रतिशत रकम कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाएको छ । तर बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले कृषिमा लगानी गर्ने भरपर्दो माध्याम फेला पार्न सकिरहेका छैनन् ।
अर्को राजधानीदेखी गाउँ गाउँ सम्म सरकारी संस्थाहरु छ्यापछ्याप्ती खोलीएका छन् । ती सहकारीहरुले पनि लगानीको भरपर्दो क्षेत्र भेटाउन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यतिमात्र होईन बेला बेलामा बिभिन्न बैकहरुले शेयर खुल्ला गर्दा शेयर किन्नेको लाम नै लाग्दछ ।
यसले के देखाउँछ भने नेपालको कृषि क्षेत्र अथवा तोकेरै भन्नु पर्दा कफी खेतीको लागि ऋण दिने वा लगानी गर्ने निकायहरु जति पनि पाईन्छन् । तर यस तर्फ कसैले पनि ध्यान दिएको पाईदैन ।
कुनै पनि उत्पादित बस्तुको बजार सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । उत्पादित बस्तुको बजार भएन भने सबै कुरा निरर्थक हुन्छ । नेपालमा उत्पादन गरिने अरेविका जातको कफी सबैभन्दा महंगो र गुणस्तरीय कफी हो ।
उच्च स्थानमा उत्पादन गरेको कफीको माग विश्व बजारमा निकै छ । पछिल्लो समयमा आएर नेपालमा खुलेका क्याफे तथा कफी हाउस एवं स्तरिय होटलमा नेपाली अर्गानीक कफीको प्रयोगको कारण नेपालको कफीले नेपाली बजारलाई पनि धान्न नसकेको अवस्था छ । यसको साथै नेपालमा खुल्दै गएका कफी कम्पनीको कारण पनि उत्पादीत कफी बिदेशमा नै पठाउनु पर्छ भन्ने छैन ।
हुन त नेपालमा उत्पादीत कफी मध्ये करिव ६० प्रतिशत निर्यात हुन्छ र ४० प्रतिशत मात्र नेपालमा खपत हुने गरेको छ । नेपालमा उत्पादीत कफी बिदेश निर्यात भए पछि नेपाली बजारको लागि भारतवाट वा इटालियन कफीको आयात भैरहेको अवस्था छ ।
कुनै पनि बस्तु तथा सेवाको व्यवसायीक उत्पादनको लागि श्रम एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । श्रम शक्ति भएन भने उत्पादन हुन सक्दैन । रोजगारको नाउँमा नेपालवाट बर्षेनी लाखौ युवा शक्तिहरु बिदेश पलायन भैरहेका छन् ।
यसरी बिदेश पलायनको कारण नेपाली उत्पादनमा निकै ठूलो ह््रास आएको छ भने घरको मुली अथवा छोराहरु नै विदेशिए पनि घर परिवारमा बिविध समस्याहरु समेत देखिएका छन् । यही व्यवसायीक कफी खेतीको शुरुवात गर्ने हो भने बाध्यतावस बिदेश पलायन हुनेहरुको लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर बन्नुको साथै नेपाली उत्पादनलाई पनि ठूलो टेवा मिल्ने देखिन्छ ।
धेरै देशहरुले अन्य मुलुकबाट कामदार लगेर उद्योग, कृषि लगायत विभिन्न व्यवसाय चलाउँछन् भने हाम्रो देशमा आफ्नै नागरिकसँग भएको श्रम शक्तिलाई पनि उपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
माथीका ५ तथ्यवाट के कुराको प्रष्ट हुन्छ भने हामीले एक पटक गम्भीर भएर सोच्यौ भने कफी खेतीवाट आफू व्यवसायीक हुने मात्र होईन देशका बेरोजार जनशक्तिलाई रोजगारको अवसर मिल्न सक्छ ।
स्वेदशमै बसेर पनि बिदेशी धन आर्जन गरि देशको अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउँदै देशलाई सम्वृद्ध बनाउनको लागि कफी खेतीले ठूलो सहयोग गर्दछ ।
– लेखक: धौलागिरि अर्गानीक प्रोडक्टका प्रोपाईटरको साथै नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय कफी सहकारी संघका पूर्व उपाध्यक्ष हुन ।
Previous articleजेठ ३२ गतेको तरकारीको मूल्य हेर्नुहोस
Next articleकिसानको दुख : न उखु बिक्यो, न गत वर्षको भुक्तानी पाए